LHASA APSO DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Lhasa Apso Dog Fampahalalana sy sary
'Ity no zanako lahy Andy. Alika miteraka Lhasa Apso izy. Alika mpamonjy izy ary naharitra roa taona vao natoky azy tanteraka fa izy no reniko mandrakizay. Izay rehetra mifanena amin'ny zanako lahy dia raiki-pitia aminy. Manintona azy ny ankizy ary mihozongozona eo noho eo ny rambony rehefa mifanena amin'ny olon-tiana alika - izay tsapany avy hatrany. Manantena aho fa hanana namana be fitiavana mandritra ny taona maro ary hikarakara ny zanako lahy Andy. Tezitra izy raha tsy mahazo a mandeha tsara farafahakeliny indray mandeha isan'andro, fa aleony mandeha an-tongotra maraina sy antoandro. Aorian'ny diany dia ampiasainy ny nify hanesorany ireo boho ahitra izay nalainy teny an-dalana. Sakanany ireo burrs ireo toy ny sakafo matsiro! '
Alika liona volombava
6 volana St Bernard
Alika kely matevina ny Lhasa Apso. Ny halavan'ny vatana dia lava kokoa noho ny haavon'ny alika. Ny maso madinidinika ary matevina volontany ary ny sofina pendant dia volom-borona. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Rakotra volo ny tongony lamosina. Mora salama ny halavany. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny haavon'ny manaikitra na somary ambany. Boribory ny tongotra ary toy ny saka miaraka amin'ny volo be dia be. Atao avo ny volony, volom-borona tsara ary entina miverina amin'ny lamosina. Misy rambony ny rambony sasany amin'ny farany. Ny palitao matevina sy matevina dia mahitsy sy lava amin'ny vatana iray manontolo, ao anatin'izany ny lohany sy ny masony, mahatratra ny gorodona. Ny loko rehetra dia ekena amin'ny peratra fampisehoana. Ny volamena, ny crème ary ny tantely no be mpitia indrindra, fa ny palitao koa dia tonga amin'ny loko maizina, vatosoa, setroka ary loko maro loko, fotsy sy mainty. Ny palitao puppy dia matetika miova loko rehefa mihalehibe ilay alika kely. Matetika ny tompon-trano dia manapaka fohy ny volon'ireo alika amin'ny alika alika kely mba hahamora ny fikarakarana azy ireo.
Alika masiaka io miaraka amin'ny fomba sariaka sy hentitra. Manan-tsaina sy velona, ​​manome biby tsara izany. Lhasa Apsos dia alika kely feno fitiavana sy be fandavan-tena izay tia ny tompony. Izy ireo dia afaka mankatò be amin'ny tompony. Ity karazana ity dia mamaly fiofanana manentana. Manana fahatsapana fihainoana fatratra izy ireo ary manao mpiambina tsara. Mandehandeha tsara ny Lhasa Apso. Mampalahelo fa latsaka kely ity alika kely ity matetika Syndrome kely alika , fitondran-tena entanin'ny olona izay heverin'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Izany dia miteraka ambaratonga maro samihafa fihetsika ratsy hivoaka amin'ny alika. Lasa mampiahiahy olona tsy fantany izy ireo, ary mety tsy mahazaka ankizy. Ho tonga fanahy iniana izy ireo miaraka amina hodi-kazo mafy iray, eo am-piezahana hangataka ny zanak'ILAY hihaino azy ireo. Ho lasa matahotra sy tsy azo atokisana amin'ny olon-tsy fantatra sy ny ankizy izy ireo ary mirona hiady amin'ny alika hafa. Matetika dia hivoatra izy ireo fanahiana fisarahana , sosotra be rehefa avela irery. Tsy mahazo miala amin'ny mpitarika ny fonosana ny mpanaraka, na izany aza, afaka mamela ny mpanaraka azy ny mpitarika entana. Afaka manjary snappish izy ireo raha gaga na avela, ary manomboka mampiseho fihetsika miambina . Ireo fihetsika ratsy ireo dia TSY toetran'ny Lhasa Apso izy ireo entanin'ny olombelona fitondran-tena vokatry ny alika tsy voatsabo toy ny karazana canine azy, ary noho ny tsy fisian'ny fitarihana, ny lalàna ary ny tsy fisian'ny fetra apetraka amin'ny alika. Alika milamina ara-tsaina izay mahazo ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana hanana toetra hafa tanteraka. Miankina amin'ny olombelona manodidina ny alika daholo izany. Raha vantany vao manomboka tena mpitondra entana ny olombelona dia hiova ho tsara kokoa ny fihetsiky ny alika.
Haavony: Ny lahy 10 - 11 santimetatra (25 - 28 cm) kely kely ho an'ny Vehivavy
Lanja: Lehilahy 13 - 15 pounds (5.9 - 6.8 kg)
Alika tena salama amin'ny ankapobeny. Indraindray manana olana amin'ny hoditra izy ireo raha tsy voatahiry amin'ny katôty ny palitao. Izy ireo dia manana fironana kely hahazoana displasia hip. Ny olana voa koa, ny olana amin'ny maso toy ny maso serizy ary fery mandeha ra.
Ireo alika ireo dia tsara amin'ny trano ipetrahana. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Mila an'i Lhasa Apsos a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda.
Manodidina ny 15 na mihoatra ny taona. Tena lava velona ity karazany ity. Ny alika sasany dia velona hatramin'ny 18 na mihoatra ny taona.
Ny ampahany lava amin'ny palitao amin'ny hazondamosina ary mianjera mahitsy amin'ny lafiny roa. Tsy mila mandanjalanja na manendasa, na dia rehefa feno palitao aza dia mila borosy indray mandeha isan'andro mba hitazomana ny palitao tsy hifangaro. Ny tompona sasany dia misafidy ny hanapaka fohy ny palitao mba hikarakarana moramora kokoa. Shampoo maina raha ilaina. Zahao ny tongotra raha ny matting sy ny raharaha vahiny miraikitra ao. Diovy tsara ny maso sy ny sofina, satria matetika rovitra. Ity karazana ity dia kely fotsiny no mandatsaka.
schnauzer mifangaro amin'ny shih tzu
Ny Lhasa Apso dia niainga tany Tibet any amin'ny Tendrombohitra Himalaya an-jatony taona maro lasa izay. Nomena ny anarany avy amin'ny tanàna masin'i Lhasa. Nandritra ny taona maro dia nitoetra irery tao Tibet ny karazan'olona sy andriana ambony. Izy io dia nampiasaina ho toy ny mpiambina ao amin'ny tempoly sy monasitera. Noheverina ho masina ilay alika. Ny finoana dia rehefa maty ny tompony dia niditra tao amin'ny vatan'ny Lhasa Apso ny fanahin'ny tompony. Tsy mora ny nahita ilay karazany ary sarotra ny nividy. Ireo alika dia noheverina ho vintana tsara ho an'ny tompony. Tamin'ny 1933, ny alika dia niparitaka tamin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao noho i C. Suydam Cutting, izay nanolotra an'i Lhasas voalohany tany Etazonia ho fanomezana avy amin'ny Dalai Lama faha-13. Ny mpitondra an'i Tibet dia hanolotra azy ireo amin'ny diplaomaty vahiny mitsidika azy ireo. Ny Lhasa Apso dia niseho voalohany tany Angletera tamin'ny taona 1920 sy tany Etazonia tamin'ny 1930. Ny AKC no nahafantatra azy tamin'ny 1935.
Herding, AKC Tsy Fanatanjahantena
Brandy sy Banzo the Lhasa Apso zanak'alika amin'ny 6 herinandro.- 'Somary maditra i Brandy ary saro-kenatra i Banzo.'
Makita the Lhasa Apso eo amin'ny roa taona eo ho eo— 'Maki (fanafohezana ny Makita) dia nomen'ny namana iray anay fony izy tokony ho 6 volana. Raha vao tonga izy dia nijanona nanalavitra antsika rehetra afa-tsy ny rahavaviko Meg izay afaka milalao amin'i Maki isaky ny mitsidika ny namantsika izy. Fa vetivety ihany dia mora nanitsy i Maki ary lasa 'malalako' an-trano:). Tena faritany izy ary maharitra hatrany amin'ny fiondranan'izy ireo indrindra amin'ireo olon-tsy fantatra. Fa raha vao mifankahalala amin'ilay olona izy dia mbola mivoy ihany fa indraindray. Vao tsy ela akory izay no nijereko ny fandaharana 'Dog Whisperer' ary hitako fa nanampy be tamin'ny fahatakarana an'i Maki. Vao nanomboka naka ny alikako aho izao mivoaka amin'ny làlana-làlana tsara :) Samy mbola mianatra izahay ary faly mandany fotoana tsirairay miaraka amin'i Maki amin'ny fahafantarana fa manao ny tsara aho -mba tarihin'izay ianarako avy amin'ilay fampisehoana. Fihetseham-po mahafinaritra toy izany:) '
chihuahua sy jack terrier mifangaro
Maximus the Lhasa Apso puppy amin'ny faha-5 volana— 'Ity i Max aorian'ny famaranana voalohany. Nasainay nokarakaraina izy mba hahiratra. Nisedra olana be tamin'ny tohatra nisy anay izy! '
Mercedes the Lhasa Apso amin'ny faha-6 taonany— 'Mercedes dia alika be fitiavana sy mora tohina. Tiany ny miaraka amiko fa tsy maintsy mijery azy manodidina ny olon-kafa aho mba tsy hitondran'izy ireo azy, satria sariaka be izy. Tiany ny milomano ary mijery TV miaraka amiko. '
'Ity i Bailey, ilay Lhasa Apso, izay madio hoditra, ao anatin'ny 9 volana. Izany tsy azo atao ny mamerina azy ao anatiny rehefa mangatsiaka, be rivotra ary milomano. Tena tia sy miasa, mihetsika foana. rehetra MANDEHANA misy sprint all-kilometatra mandroso rehetra. Tia milalao fakana ary avy eo mihazakazaka ny tohatra rehefa tsy tafiditra amin'ny asany isika. 6 taona izy izao ary mbola manana toe-batana tena ara-panatanjahan-tena, hoditra, taolana ary hozatra — hozatra ho an'ny alika 14 kilao. '
Hachi ilay alika kely Lhasa Apso 4 volana lahy avy any India mijoro amin'ny seza manga
Hachi ilay alika kely Lhasa Apso 4 volana lahy avy any India mihazakazaka miaraka amin'ny baoliny manga ao am-bavany
'Mido ity amin'ny faha-7 taonany. Alika tony sy be fitiavana izy izay nalaina tamin'ny PetFinder. Mihetsika toy ny saka izy indraindray !! Rehefa noraisinay izy dia 3 taona izy ary rehefa nihalehibe izy ary nahalala azy bebe kokoa, heverinay fa notezaina tamin'ny saka izy. Milelaka ny kitapony izy avy eo manadio ny tarehiny. Nitsambikina teo amin'ny seza izy, avy teo amin'ny sisiny, fa tsy ny eo aloha toa ny Lhasa Apso iray hafa. Rehefa mandeha manandratra azy isika dia mihodina izy. Tena manana quirks karazana saka !! Izy dia tia bacon sy akoho (alika inona no tsy?). Tsy nilalao kilalao mihitsy izy nandritra ny taona voalohany, indray andro dia hitanay izy namaky kilalao volom-borona, nanomboka teo dia tiany ny kilalaony. Mbola tsy hanenjika baolina tenisy aza! Tonga soa amin'ny Lhasa Casey iray hafa izay 12 taona izy amin'ity taona ity. Saingy tsy tiany loatra eo akaikiny izy, matory eo am-pandriana izy ireo fa amin'ny lafiny mifanohitra, tsy tiany ny manakaiky azy loatra. Tsy haiko ny antony?
Koko ilay alika kely Lhasa Apso purebred amin'ny 5 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny Lhasa Apso
Sary Lhasa Apso 1
Lhasa Apso Sary 2
Alika Lhasa Apso: Sarivongana Vintage azo angonina
lhasa apso chihuahua mix fivarotana alika kely
omby terrier amerikana bulldog mix
spaniel springer anglisy miaraka amin'ny rambony
shar pei st bernard mix